Nuxurka Muxaadaro Sheekh Mustafa Uga Hadlay Guurka & Isfahamka Lamaanaha Oo Qoraal Ah - Aayaha
Nuxurka Muxaadaro Sheekh Mustafa Uga Hadlay Guurka & Isfahamka Lamaanaha Oo Qoraal Ah
Foos Omar FantasticNovember 10, 2020
Guurku waa wax ay naftu iska jeceshahay laakiin dhaqanka qofka Muslimka ah guriguu ka muuqdaa. Guryuhu hadeey daganyihiin oo ay ku marantahay cabsida ilaahay (SWT) umaddoo dhan ayaa xasileysa balse hadeey karayaan waxay u badantahay in dadkoo dhan aysan dagin.
Bini aadamka ayaa waxa uu ku wada socdaa in leys ixtiraamo oo la isutanaasulo isla markaana ay dadku isdhammeystiraan sidaa darteed, Ilaahay (SWT) wuxuu leeyahay “Haweenka waxaad kula dhaqantaan wanaag samahaasna wuu joogayaa xittaa marka lakala tagayo,” sida Ilaahay (SWT) uu tilmaamay.
Lamaanaha ayaa waxaa la faray inay wanaag kuwada joogaan isla markaana si wanaagsan ay u wada macaamilaan.
Wanaaga ayaanan ku ekeyn inta la isla joogo kaliya balse xittaa haddii la kala tagayo ayuu ilaahay (SWT) tilmaamay in wanaag lagu kala tago.
Bini aadamka ayaa wuxuu kuwada joogaa akhlaaqda iyadoo marka la isguursanayo uu qof kasta qarsadao cilladihiisa.
Laakiin nolosha dhabta ah ayaa bilaabato marka guriga la tago waqtigaas oo la ogaado qofka dhabta ah ee aad tahay.
Si kastaba, adiga iyo gabadha ayaa waxaa wada noqoteen isku degaan adinkoo uwada hoyanaya hal qol markaa waxa la isku leeyahay xuquuq badan.
Haweeneyda ayaa leh inta lagu leeyahay in lamida oo wanaag ah hadana ragga ayaa dumarka dheer in marka guriga la joogo ay leeyihiin maamulka guriga.
Dumarka ayaa waxaa lafaray in ragga ay ku adeecaan maamulka guriga halka ragga la faray in wanaag ay ku dhaqaan guryohooda.
Sidoo kale lamaanaha ayaa waxaa la faray inay noqdaan laba qof oo is ixtiraama, hadal fiican kuwada hadla, hadeey wax isku sheegayaan si wanaagsan ay iskugu sheegaan, laba qof oo kala dambeyn leh inay ahaadaan iyo sidoo kale laba qof oo isqadarinaya inay ahaadaan.
Wax kasta oo Qur’aanku tilmaamay iyo Axaadiithta Nabiga (SCW) ee dhaqan ah ayaa la rabaa cida aynu la noolnahay inaan kula dhaqano. Inkastoo ay adagtahay hadana waxay taasi u baahantahay inbadan in la isku dayo.
Waxan qoraal ahaan idinkaga soo dhignay Muxaadaro ka hadleysay Guurka, wada noolaanshaha iyo isafahamka uusoo jeediyay Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun, ajar iyo xasanaad aanan lasoo koobi karin Ilaahay haka siiyo.